Immigration And Customs vaongorori Job Description / Mabasa And Mutoro Template - JobDescriptionSample.org
musha / Uncategorized / Immigration And Customs vaongorori Job Description / Mabasa And Mutoro Template
Immigration And Customs vaongorori Job Description / Mabasa And Mutoro Template
Jakobho Chikumi 28, 2016 Uncategorized Leave mhinduro 585 Views
Kuongorora uye kuongorora zvinhu, zvakapararira rinobatsirwa, vanhu, uye zvinogadzirwa, achiuya kana vachienda muUnited States Of America kana pakati anoti kuwana kutyorwa immigration uye nzira mirayiro.
Rongai kuti pamutemo basa, akadai Somuenzaniso Kubviswa uye nonotsa vanhu vanozivikanwa kugara kutyora tsika kana immigration mitemo.
Ziva uye kuwana contraband kukutengeserana, uye motokari, ndege, kana motorboats kuti ane nhumbi kwakadaro.
Kunzwisisa uye tsanangura mitemo nemirayiro kuna shippers, kuzova hava-, vashanyi, uye Vagadziri.
Ongorora zvinhu, zvikwama, uye pasiri nyaya kupinda kana kusiya U.S. nokuti maererano kushandisa U.S. tsika mitemo uye mubereko mitemo.
History uye tsvakurudzo basa- kwema, mhedziso, enderana zviito, kudarika, zvikanganiso, uye pazviridzwa.
Kutanga guta uye zviri pamutemo pamwe uye prosecutions nemamwe masangano mapurisa apo kudzidza uye kururamisira izvi zvaipesana immigration kana tsika nemirayiro.
Bvuma maererano mhedziso panguva immigration nyaya kana mudare kuti nyika.
Sarudzai mutero kuti inobhadharwa pamusoro nhumbi.
Unganidzai mienzaniso zvigadzirwa maererano vanoongorora, ongororo, kana ongororo.
Kuongorora zvirongwa basa refunds uye nyaya ine chokuita nokuregererwa kana zvigadziriswe kuti fines kana kuumbwa.
Job purogiramu Kukosha
Kuverenga Zivo-kunzwisisa zvirevo vakagadzirira mitsara basa chokuita docs.
Active Kuteerera-Kupa ruzivo yose chii vamwe-vanhu vari kutaura, kushandisa nguva uye simba kuti kunzwisisa zvinhu iri kugadzirwa, vachikumbira mibvunzo sezvo zvakakodzera, uye haana kukanganisa pa zvisingagamuchirwi ezvinhu.
Kunyora-Kutaura zvinobudirira papepa sezvo zvakarurama zvinodiwa revanhu.
Kutaura-Kutaura vamwe mashoko zvakanaka.
Maths-Kutaura masvomhu kugadzirisa nyaya.
Science-Kushandisa zvinodzorwa zvinotaurwa uye nzira kugadzirisa matambudziko.
Thinking-Utilizing Critical chikonzero uye akafunga kuti ayeuke makomborero zvinongoitika zvomurume mhedziso, sarudzo inotsiva kana nzira matambudziko.
Active-Learning-Kuziva ramifications manyoro chokwadi kuti zvose achangopfuura uye kuuya matambudziko zvokuita uye.
Kudzidza Nzira-Pakusarudza uye kushandisa trainingPERinstructional nzira uye pachishandiswa zvakakodzera kuti dambudziko kana kunzwisisa kana kudzidzisa nyaya itsva.
Club-MonitoringANDAssessing chokupika zvimwe vanhu, pachako, kana masangano rokusika kuitika kana kutora remedial matanho.
Social Perceptiveness-Kuva vanoziva vamwe’ Kurerekera nei vanopindura sezvakaita zvavanoita uye kunzwisisa.
Salesmanship-Begging vamwe kunatsiridza pfungwa dzavo kana maitiro.
Mediation-Kuendesa vamwe pamwe uye kuedza ayananise variances.
Kudzidzisa-Kurovedza vamwe HOWTO kuita danho.
Service zvevhiki-Zvechokwadi achitsvaka mazano kuti vabatsire vanhu.
Advanced Problem-Kugadzirisa Kuziva dilemmas yakaoma uye kudzokorora mashoko kuti kwakabatana dzika mhinduro uye kuvaka uye funga inotsiva.
Operations Yekuongorora-Kudzidza chigadzirwa zvinodiwa uye zvinodiwa kuti chakagadzirwa.
Engineering Design-Kubereka kana achichinja maturusi uye ouinjiniya kupa nevatengi anoda.
Gear Selection-Kusarudza mhando midziyo uye zvokurimisa vaiva kudiwa kuuraya basa.
Installation-Kuwedzera michina, mano, cabling, kana anoronga vanosangana zvinodiwa.
Development-Writing kombiyuta Mabhokisi maererano zvinangwa zvakawanda.
Rinoshanda Monitoring-Kuona zvinhu, dials, kana zvimwe zvairatidza kuti pave pane mudziyo uchishanda zvakakodzera.
Operation Nemaderedzerwe-Kutadzisa nzira kuti giya kana namano.
Maintenance-Kuita netsika yokuchengeta pamusoro zvinhu uye kusarudza apo uye worudzii Kuchengetedzwa runodiwa.
Troubleshooting Kuziva zvikonzero shure inoshanda glitches uye kusarudza kuti zvinhu zvofambiswa sei nezvazvo.
Kugadzira-Kudzorera hurongwa kana mienzaniso kushandisa zviridzwa zviri zvakafanira.
Quality Kuzvidzora Analysis-Kuita bvunzo uye kuongororwa zvinhu, zvingaitwa, kana unyanzvi kuongorora functionality kana unhu.
Kutongwa uye Zvisarudzo-Uchifunga hama mhosva uye pamusoro maitiro zvinhu zvikuru kuti vanogona kusarudza munhu yakanakisisa akakodzera.
Analysis-Kuona kuti unyanzvi ripi zvaro ishande uye sei alterations pakuvhiya, ezvinhu, uyewo mhepo kungakanganisa Migumisiro.
Nzira Yekuongorora Kuziva matanho kana zviratidzo maitiro uyewo hama kuti zvinangwa wegadziriro, zviito vaifanira kusimbisa kana kubudirira yakarurama.
Time Management-Kudzora vamwe’ nguva uyewo munhu private nguva.
Operations mari Kuziva kuti madhora anowanzovimbwa paakapiwa kuwana basa nokuzadzikiswa, uye nekurangarira pamusoro mari idzi.
Pokudzora Content Vawane-Kuwana uye Paakaziva akananga yakarurama images giya, zvinhu, uye zvigadzirwa vaiva vanofanira kuita zvimwe shanda.
Management pamusoro Workers Resources-Kuwana mutange, uye kumutungamirira vanhu pavanenge vachishanda, kuziva inonyatsobudirira vanhu kuti basa.
Training Kukosha Experience Qualification
Senior School Level (kana Ged kana High School yokuenzana advertising)
Vazhinji College Training
Career Management Unyanzvi Qualification
Success / kuedza – 89.22%
rusimbiriro – 91.30%
kurudziro – 88.50%
utariri – 89.09%
mushandirapamwe – 90.82%
Basa panyaya Vamwe – 90.25%
Stress Houkago – 90.23%
kuvimbisika – 92.57%
Nezvemabasa Detail – 91.50%
simba – 97.40%
rusununguko – 89.58%
okugadzira zvinhu – 86.84%